Nhau - Kutsanangura Reusable Yekutakura Packaging uye Maitiro Ako BY RICK LEBLANC
Kutsanangura Reusable Yekutakura Kuteedzera uye Maitiro Ako BY RICK LEBLANC
Ichi ndicho chinyorwa chekutanga mune matatu-chikamu akateedzana naJerry Welcome, aimbove purezidhendi weReusable Packaging Association. Chinyorwa chekutanga ichi chinotsanangura kugadziriswazve kutakura kwekutakura uye basa rayo muketani yekupa. Chinyorwa chechipiri chichataura nezve hupfumi uye zvakatipoteredza mabhenefiti ekugadziriswa kwekutakura zvekufambisa, uye chinyorwa chechitatu chinopa mamwe ma parameter uye maturusi ekubatsira vaverengi kuona kuti zvinobatsira here kushandura zvese kana zvimwe zvekambani imwe-yenguva kana mashoma-anoshandisa kutakura kutakura kune reusable yekufambisa yekupakata system.
Yakakoromoka inodzoserwa inovandudza mashandiro ezvinhu
Reusable 101: Kutsanangura Reusable Yekutakura Kuteedzera uye Maitiro Eayo
Reusable kutakura kurongedza kunotsanangurwa
Mune nhoroondo yadarika, mazhinji mabhizinesi akagamuchira nzira dzekudzora yekutanga, kana yekupedzisira-mushandisi, kurongedza. Nekuderedza kurongedza kwakakomberedza chigadzirwa chaicho, makambani aderedza huwandu hwesimba nemarara zvinoshandiswa. Ikozvino, mabhizinesi ari kuongororawo nzira dzekudzikisa kurongedza kwavanoshandisa pakutakura zvigadzirwa zvavo. Iyo yakanyanya kudhura-inoshanda uye ine simba nzira yekuzadzisa ichi chinangwa ndeye reusable kutakura kurongedza.
Reusable Packaging Association (RPA) inotsanangura kudzoreredza kurongedza semapallet, midziyo nemadhoni zvakagadzirirwa kuti zvishandiswazve mukati mecheni yekutengesa. Zvinhu izvi zvakavakirwa kwakawanda nzendo uye hwakawedzerwa hupenyu. Nekuda kwehunhu hwavo hunogadziriswazve, ivo vanopa kudzoka nekukurumidza pane investment uye yakaderera mutengo-per-rwendo pane imwechete-yekushandisa zvigadzirwa zvekutakura. Pamusoro pezvo, anokwanisa kuchengetedzwa nemazvo, anobatwa uye nekuparadzirwa mukati meketani yekutengesa. Kukosha kwavo kunonzwisisika uye kwave kusimbiswa mumaindasitiri mazhinji uye mashandisiro. Nhasi, mabhizinesi ari kutarisa kuiswazve kurongedza semhinduro yekuvabatsira kudzikisa mutengo muzvinhu zvekutengesa pamwe nekuzadzisa zvinangwa zvavo zvekusimudzira.
Mapareti anoshandiswa zvakare nemidziyo, zvinowanzo gadzirwa nehuni hwakareba, simbi, kana mhandara kana zvekare-zvemukati mapurasitiki, (asingagadziriswe nemakemikari uye hunyoro hune yakanaka yekudzivirira zvivakwa), zvakagadzirirwa makore mazhinji ekushandisa. Midziyo iyi yakasimba, ine hunyoro-hunovakwa kudzivirira zvigadzirwa, kunyanya munzvimbo dzakashata dzekutakura.
Ndiani anoshandisa reusable kurongedza?
Mabhizinesi akasiyana siyana uye maindasitiri mukugadzira, kubata zvinhu, uye kuchengetedza nekuparadzira zvakawana zvakanakira kutakurika kwekutakura kwekutakurisa. Heano mimwe mienzaniso:
· Vagadziri vemagetsi nemakomputa uye vanounganidza
· Zvemagetsi zvikamu zvevanogadzira
· YeMotokari gungano zvinomera
· Mamwe akawanda marudzi evanogadzira
Chikafu uye chinwiwa
Vagadziri vezvikafu nezvinwiwa nevanozvigovera
Vagadziri venyama nehuku, vanogadzira uye vanogadzira
Gadzira varimi, kugadzirisa munda uye kugovera
· Vatengesi vezvitoro zvezvinhu zvinobikwa, mukaka, nyama uye zvigadzirwa
· Kununurwa kwebheka uye nemukaka
Vagadziri vemapipi nekokoreti
Retail uye mutengi chigadzirwa kugovera
· Dhipatimendi zvitoro
· Zvitoro zvepamusoro nezvitoro
· Mishonga yekutengesa
· Vagairi vemagazini nemabhuku
· Vanotengesa zvekukurumidza
· Maketani eresitorendi nevatengesi
Makambani anoita zvekudya
· Auto zvikamu vatengesi
Nharaunda dzinoverengeka mukati meketani yekuwanisa zvinhu dzinogona kubatsirwa kubva mukugadzirisa kutakurwa kwekutakura, kusanganisira:
· Inbound mitoro: Mbishi zvinhu kana zvidiki zvinotumirwa kunzvimbo yekugadzirisa kana yegungano, senge mafunguro ekufambisa anotumirwa kune yemagetsi gungano chirimwa, kana hupfu, zvinonhuwira, kana zvimwe zvinoshandiswa zvinotumirwa kubhodhoro hombe.
· In-kudyara kana kupamha basa richiitwa: Midziyo inofamba pakati pekuungana kana kugadzirisa nzvimbo mukati memumwe chirimwa kana kutumirwa pakati pezvirimwa mukati mekambani imwechete.
· Zvinhu zvakapedzwa: Kutumirwa kwezvinhu zvakapedzwa kune vashandisi kungave zvakananga kana kuburikidza nekuparadzira netiweki.
· Chikamu chebasa: "Mushure memusika" kana zvikamu zvekugadzirisa zvinotumirwa kunzvimbo dzekushandira, vatengesi kana nzvimbo dzekugovera kubva kumiti yekugadzira.
Pallet uye mudziyo wekushambidza
Yakavharwa-chiuno masisitimu akanakira reusable kutakura kurongedza. Midziyo inogadziriswazve uye mapallet anoyerera kuburikidza nesystem uye anodzoka asina chinhu kune yavo yekutanga poindi (reverse logistics) kuti atange kuita kwese zvakare. Kutsigira iyo reverse logistics inoda maitiro, zviwanikwa uye zvivakwa zvekutevera, kutora uye kuchenesa midziyo inogadziriswazve wozoendesa kunzvimbo yekumusoro kuti ishandiswe zvakare. Mamwe makambani anogadzira zvivakwa uye anotarisira maitiro acho pachawo. Vamwe vanosarudza kuburitsa zvigadzirwa. Iine pallet uye yekudyara yemidziyo, makambani anoburitsa kunze kwekugadziriswa kwepallet uye / kana manejimendi manejimendi kune yechitatu-bato yekudyara manejimendi sevhisi. Aya masevhisi anogona kusanganisira kubatanidza, logistics, kuchenesa uye kutevera kweasset. Iyo mapallet uye / kana midziyo inoendeswa kumakambani; zvigadzirwa zvinotumirwa kuburikidza necheni yekutengesa; ipapo sevhisi yekushandira inotora mapallet asina chinhu uye / kana midziyo yoidzosera kunzvimbo dzekushandira kuti dziongororwe nekugadziriswa. Midziyo yekuchenesa inowanzo gadzirwa yemhando yepamusoro, yakasimba danda, simbi, kana plastiki.
Yakavhurika-loop kutumira system inowanzoda kubatsirwa nekambani yechitatu-yekudyara manejimendi kambani kuti iite kudzoka kwakaomarara kwekutakura kusina chinhu. Semuenzaniso, midziyo inogona kushandiswazve inogona kutumirwa kubva kune imwe kana nzvimbo zhinji kuenda kunzvimbo dzakasiyana. Kambani yekushongedza yekudyara inogadzira dziva rekubatanidza kuitira kudzosa kwekushomeka kwekushambadzira kwekutakura. Iyo yekudyara manejimendi kambani inogona kupa akasiyana masevhisi senge kugovera, kuunganidza, kuchenesa, kugadzirisa uye kuteedzera kweanoshandiswazve kutakura kurongedza. Sisitimu inoshanda inogona kudzikisira kurasikirwa uye kugadzirisa kugona kwekutengesa.
Mune aya mashandisirwo anoshandiswazve mashandisirwo emari akakwirira achibvumira vashandisi vekupedzisira kuwana mabhenefiti ekushandisazve ivo vachishandisa capital yavo kuzviita zvebhizimusi zviitiko. Iyo RPA ine nhengo dzinoverengeka dzine yavo uye dzinorenda kana kudhirowa yavo inodzosera zvinhu.
Mamiriro ezvinhu azvino ehupfumi anoramba achityaira mabhizinesi kudzikisa mutengo pese pazvinogoneka. Panguva imwecheteyo, kune ruzivo rwepasirese rwekuti mabhizinesi anofanirwa kushandura zvechokwadi maitiro avo anoparadza zviwanikwa zvepasi. Aya mauto maviri ari kukonzeresa kumabhizimusi mazhinji kutora mashandisirwo anoshandiswazve, zvese semhinduro yekudzikisa mutengo uye kutyaira kuenderera kwekutengesa.
Post nguva: May-10-2021